लमजुङमा बाढीकाे वितण्डाः लिवर्टी हाइड्रो पावर बगायो, २ जनाकाे शब फेला, धेरै सम्पर्कबिहिन – PathivaraOnline
Home > समाचार > लमजुङमा बाढीकाे वितण्डाः लिवर्टी हाइड्रो पावर बगायो, २ जनाकाे शब फेला, धेरै सम्पर्कबिहिन
लमजुङमा बाढीकाे वितण्डाः लिवर्टी हाइड्रो पावर बगायो, २ जनाकाे शब फेला, धेरै सम्पर्कबिहिन
admin July 25, 2019 समाचार	0
मजुङ– अविरल बर्षाका कारण लमजुङको दर्दी खोलामा आएको बाढीले लिवर्टी हाइड्रो पावरमा क्षति पुर्याएको छ । घटनास्थल पुग्न नै समस्या भइरहेको छ ।’ कच्ची बाटो भएकाले घटनास्थलमा पुग्न समस्या भएको प्रहरीले जनाएको छ । घट्नास्थल नजिक भनिएको सुलिभञ्ज्याङ प्रहरी चौकीका प्रहरी सहायक निरीक्षक गोपाल कुमार श्रेष्ठले घटनाबारे सबै विवरण आइनसकेको जनाए ।
दर्दी खोलाबाट २५ मेघावाट क्षमताको लिवर्टी हाइड्रो पावर निर्माणधिन छ । यता, लिबर्टी हाइड्रोपावरका सञ्चालक राम पाण्डेका अनुसार बाढीका कारण आयोजनामा कार्यरत १५–२० सम्पर्कविहीन छन् । त्यस्तै, हाइड्रोपावरको उपकरणहरु ठूलो क्षति पुगेको उनको भनाई छ ।
सदरमुकाम बेसी शहरबाट २५ किलोमिटर टाढा रहेको हाइड्रोपावरसम्म पुग्न कच्ची बाटो भएकाले सुरक्षाकर्मी र उद्धार टोली पुग्न नसकेको उनको भनाई छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय लमजुङका डिएसपी रविन्द्र गुरुङका अनुसार हाइड्रो पावरमा कार्यरत २ जनाको बाढीले बगाएर मृ*त्यु भएको छ । उनीहरुको पहिचान हुन सकेको छैन ।
यस्तो छ आजकाे माैसम! कहाँ हुदैछ मेघ गर्जन सहित बर्षा? जान्नुहाेस्
बाजुराकि एक सु*त्केरी महिलालाई अ*त्याधिक र*क्क्तस्रा*बले बे*होस भएपछि डिउटीमा खटिएका सुरक्षाकर्मीले र*गत दिएर ब*चाए!
थामिएन सपनाकि आमाको आसु , आमासंगै यसरी रोइन सपना पनि… (भिडियो हेर्नुस्)
श्रीमान कतारमा छन् : फुपुको छोराको मृत्युको खबर सुनेर गएकी मिना घर फर्कदा आफ्ना दुवै छोरा गुमाइन्
भर्खरै त्रिभुवन विमानस्थलबाट आयो यस्तो सुन्दै अचम्म लाग्ने खबर
डुब्यो बनेपाको पुल बजार!
फेसबुककाे चिनजानबाट एक नेपाली महिला कम्बोडियामा बेचिएपछि…